> Resource > Video > Sida loo sameeyo AVI Files yar
Video Audio Input (sidoo kale loo yaqaan AVI) waa qaab faylka loo isticmaalo kaydinta heeso iyo video clips ah. Tayada AVI video yahay mid aad u wanaagsan laakiin faylka mar walba qaataa ilaa badan oo boos drive adag. Haddii aad rabto in aad ku kaydiso kuwaas video files on PC ama u daawado looxa ama casriga ah, run ahaantii aad u baahan tahay inaad AVI gudbiyo yar.
Si lagaaga caawiyo in aad si fudud u samayn AVI gudbiyo yar, Wondershare Video Converter ( Video Converter u Mac ) xaqiiqdii waa waxa aad u baahan tahay. Thanks to interface user dareen leh, waa u fududahay in la isticmaalo, xataa haddii aad ku cusub tahay video processing. Waxaa intaa dheer, waxaad dooran kartaa mid ka mid ah presets diyaar-dhigay, waayo, iPad, iPod, iPhone, Sony PSP, Madaxweyne Siilaanyo 360, casriga ah (oo ay ku jiraan Android Phones), kiniiniga, iyo ciyaartoyda multimedia. Hadda raacaan tilmaamaha fudud ee hoose si ay u bartaan sida loo sameeyo AVI yar yar leh saddex tallaabo fudud:
Ku rakib oo ay maamulaan video Converter this. Markaas riix "Add Files" button ee xarunta of interface barnaamijka in la furo suuqa kala Add File wada hadal ah. Dooro mid ama wax ka badan video files oo guji "Open". Ama waxaad si toos ah jiidi karaan jeedi faylasha aad barnaamijka.
2 beeg goobaha video si ay u sameeyaan AVI gudbiyo yar
Markaas riix batoonka "Settings" ee geeska hoose ee saxda ah ee barnaamijka. Daaqadda pop up ka, aad gacanta qabsato karaa beegyada uu wax soo saarka adigoo gujinaya fallaadha ag khaanadda uu ka soo xusho liiska hoos-hoos. Fiiro u yeelo in xajmiga iyo tayada video wax soo saarka waxaa go'aamiya qiimaha bitrate: sare bitrate ah, si fiican u tayada iyo ka weyn size file video ah. Sidaas darteed haddii aad rabto in aad si loo yareeyo xajmiga file filimka, aad u baahan tahay si ay u yaraadaan ay bitrate.
Si aad u yar isla markiiba AVI, waxaad dooran kartaa "Size Small" doorasho. Markaas barnaamijka si toos ah u yareyn doontaa tirada AVI.
Ka dib markii la qabsado goobaha video, ka dhacay OK iyo aad u tagto laabtaan interface ugu weyn. Markaas inaad ogaataa inay suurtowdo video size wuxuu noqonayaa yar marka la barbar dhigo mid ka mid ah asalka ah.
3 Save AVI ah video cusub
Markaas midkood wuxuu kaa badbaaadin karaa qaabka video asalka ama waxaa loogu badalo in ay qaab kale adigoo gujinaya image qaab dhinaca midig ee suuqa hoose. Si habka video diinta ka bilaaban, riix "Beddelaan" button ee geeska hoose ee saxda ah. Ka dib markii ay diinta ka dhamaato, riix "Folder Open" button iyo folder ay ku jiraan video ah la gediyay furi doonaa.